Moa 3D zavatra vita pirinty ny fanahy? Ento ho fantatrareo ny fitaovana fanontam-pirinty 3D mafana indrindra - China Cixi Lanbo Pirinty natao
ABS kofehy / 1,75 / 1Pj
ABS kofehy /1.75/ 2Pj
ABS kofehy /2.85/ 1Pj
ABS kofehy /3.0 / 1Pj
PLA kofehy / 1,75 / 1Pj
PLA kofehy / 1,75 / 2Pj
PLA kofehy / 2,85 / 1Pj
PLA kofehy /3.0/ 1Pj
Mangarahara spool ny PLA
Moa 3D zavatra vita pirinty ny fanahy? Ento ho fantatrareo ny fitaovana fanontam-pirinty 3D mafana indrindra
Maro ny olona mitandrina ny 3D fanontam-pirinty, voalohany indrindra, nahasarika ny zavatra kely tsara tarehy pirinty ny 3D. Ankoatra izany, ny sasany namana no hikarakara ny fanatanterahana ny isan-karazany ohatra ny 3D mpanonta, ary fitaovana fanontam-pirinty 3D no tsirambina amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra. Raha ny marina, fitaovana fanontam-pirinty 3D no azo lazaina ho manan-danja ara-nofo ho fototry ny fampandrosoana ny teknolojia fanontam-pirinty 3D. Ny fampandrosoana ny fitaovana tena mamaritra fanontam-pirinty 3D raha azo ampiasaina be kokoa.
Amin'izao fotoana izao, indrindra ny fitaovana fanontam-pirinty 3D tafiditra polymer fitaovana, fitaovana vy, vovoka fitaovana, fitaovana tanimanga sy mitambatra fitaovana.
Polymer indrindra ahitana fitaovana plastika injeniera, mombamomba-plastika, thermosetting plastika, photosensitive resins, sns, sy ny fanatontosana ny samy hafa karazana fitaovana dia tena hafa.
Injeniera plastika dia manondro ny orinasa indostrialy plastika nampiasaina ho faritra na fitaovana casing ivelany. Izany dia plastika amin'ny hery tsara, fiantraikany fanoherana, hafanana fanoherana, ditranao sy ny fahanterana fanoherana. Izy io dia karazana fitaovana fanaovana pirinty 3D tamin'ny isan-karazany ny fangatahana; bioplastics izany no tena manana PLA, PETG, PHB, sns, ary manana biodegradability tsara; thermosetting resin manana hery ambony sy ny afo fanoherana, ary tena mety ho an'ny vovoka tamin'ny laser sintering dingana namorona mampiasa 3D fanontam-pirinty; photosensitive resin dia manana hafainganam-pandeha haingana fanasitranana, table Excellent maina fampisehoana, malamalama fijery aorian'ny koronosy, dia ny safidy maro avo-fametrahana mazava tsara entana fanontam-pirinty.
Na dia amin'izao fotoana izao ny ankamaroan'ireo fitaovana fanontam-pirinty 3D dia plastika, ny tsara sy ny herinaratra milina hery conductivity ny metaly efa nanao mpikaroka tena liana amin'ny fanaovana pirinty ny vy zavatra. Ny tena ahitana fitaovana metaly ferrous metaly anisan'izany Stainless vy sy superalloys, ary tsy ferrous metaly toy ny titane, manezioma firaka, ary gallium.
Izany dia tsy ny fitaovana plastika na ny fitaovana metaly, fa hifanaraka amin'ny zava-tsara sy ny fanontam-pirinty any 3D teknolojia, vovoka fitaovana mbola safidy tsara ho an'ny fanontam-pirinty 3D. 3D pirinty avo dia mitaky fitaovana vovoka, ary ny koronosy vovoka dia takiana ny hanana zavatra tsara formability, koronosy avo hery, sombiny kely vovoka habeny, olana eo amin'ny agglomération, Rolling tsara fananana, mety hakitroky sy porosity, ary ny fifadian-kanina sy ny hamafin'ny paharitry. Ny tena vokatra voalohany sprinkler fasika karazana printy 3D lasa ny MANONTANY Teknolojia Co., Ltd. quartz mampiasa fitaovana fasika amin'ny vovoka.
Aluminosilicate vovoka tanimanga dia azo ampiasaina amin'ny 3D pirinty tanimanga vokatra. Ny 3D pirinty tanimanga vokatra dia impervious ny rano, hafanana (hatramin'ny 600 ° C), recyclable, tsy misy poizina, fa ny heriny dia tsy avo, dia azo ampiasaina ho toy ny filamatra cookware, tableware (kaopy, vilia baolina, takelaka, atody kaopy sy ny coasters)) sy ny fitaovana fandravahana an-trano toy ny fanaovan-jiro, taila, vazy, ary Artworks.
Azo antoka fa, toy ny fototry ny 3D fanontam-pirinty, fitaovana fanontam-pirinty 3D ho lasa manan-danja ho avy tsena ho an'ny fanontam-pirinty 3D. Mihamaro ny fitaovana amin'ny fampisehoana tsara dia mandroso mba hampiroborobo ny fampandrosoana ny orinasa fanontam-pirinty 3D. Ankoatra izany, ho fanampin'ny 3D fitaovana fanontam-pirinty, mahafehy ny teknolojia fototra sy ny singa fototry ny 3D fanaovana pirinty koa no tena fandrosoana eo amin'ny fampandrosoana ny orinasa ao an-toerana fanontam-pirinty 3D. Ny tafio-drivotra andian-dahatsoratra printy 3D natomboky ny MANONTANY no voalohany inkjet printhead nitranga in Shina. (3D pirinty singa fototra) dia niavaka, ary manantena aho fa ireo orinasa ao Shina bebe kokoa dia afaka mampiasa vola bebe kokoa ny heriny tamin'ny fampandrosoana ny teknolojia fototra 3D fanontam-pirinty fa tsy miantehitra tanteraka amin'ny teknolojia avy any ivelany.
Post fotoana: Aug-16-2018
Shenwu South Road, Kandun Street, Cixi, Ningbo, Zhejiang, Sina